Zvishandiso zvishanu zvepamusoro zveKukudziridzwa Kwemitambo Yenhare - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Mobile Applications, Mobile Apps, nhare mbozha kusimudzira, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Iyo indasitiri yemitambo yepasirese inogona kukosheswa pa 128.5 Bhiriyoni ne2020 nefoni ichiwana pamusoro pe50% muzana yemugove wemusika. Nehunyanzvi hwekuvandudza matekinoroji senge Augmented reality uye rakapotsa chokwadi mumufananidzo, izvi fungidziro zvingangodaro zvichitenderera zvichitevera indasitiri yenhare. Matekinoroji efoni akachinja zvakanyanya mumakore mashoma apfuura. Kugadziridza munzvimbo ino kwakafukidza zvakawanda zvisingakwanisike izvo zvakambotenderera mumusika weapps. Matambudziko senge kupisa zvinhu, kushomeka kwekuchengetedza, kugadzirisa mabhenefiti, bhatiri nyaya nezvimwewo zvese zviri kugadziriswa kana zvirinani kuti mamiriro ezvinhu avandudzika zvakanyanya.
Read more: 7 Asinga tsanangurike Matipi Ekubudirira Nhare Yemitambo Kubudirira
Gadzirisa yako nhare mbozha kusimudzira pamwe neyedu nyanzvi sisitimu. Tora kopi yako yemahara yedu nhanhatu nzira yekubudirira nhare mbozha kusimudzira. Dhawunirodha eBook:
Aya ese metric uye fungidziro dzaita nhare mbozha kusimudzira yakakodzera inivhesitimendi. Makambani matsva mazhinji ari kuenda kubudiriro yemitambo netarisiro yekuhwina hombe. Nepo ese maitiro aya achiratidza musika positivity, hazvisi nyore kuti vanhu vapinde muindastiri iyi. Kunyanya kune avo vanobva kune isiri-tekinoroji kumashure vasingakwanise kuenderana nehunyanzvi hwekuita hunobatanidzwa nhare mbozha kusimudzira. Nepo huwandu hwenyaya dzakatarisana nadzo husinganzwisisike mune rimwe bhurogu takaita zvese zvatinogona kugadzirisa imwe yeanopuruzira nyaya - Ndechipi chishandiso chekusarudzira nhare mbozha kusimudzira? Pano tichaongorora iyo pamusoro 5 nhare mbozha kusimudzira midziyo iyo iwe yaunogona kushandisa kutanga purojekiti yako:
Read More: 8 Matanho Ekubudirira Nhare Yemitambo Kubudirira
1. Unreal Injini:
Shamisa Engine 4 (UE4) ndiyo inotevera vhezheni ye UDK (Unreal Development Kit). Iyo injini nyowani nyowani yakaburitswa neEpic Mitambo. Iyi kitambo yekuvandudza kit inouya nesarudzo dzakakura dze mobile, PC pamwe nekunyaradza mutambo mutambo. UE4 inokomberedza inoshamisa graphical kugona senge yepamusoro simba yekuvhenekesa uye nyowani chidimbu sisitimu iyo inogona kubata kusvika kumiriyoni zvidimbu muchiitiko panguva imwe chete. Uku kurapa chaiko kune chero mugadziri wemutambo we3D.
Iyo itsva Unreal Injini 4 inouya neakawanda shanduko kubva kune yakatangira. Kusiyana neUDK, Unreal Injini 4 inoshandisa C++ semutauro wekunyora, ichitsiva zvachose yakakurumbira UnrealScript. Zvakare, iyo Kismet inotsiviwa neimwe mushandisi-inoshamwaridzika Blueprint system. Nekuda kwekuchinja uku, kunyangwe vagadziri vemitambo vane ruzivo vanozopfuura kudzidza curve kubata iyo yakagadziridzwa vhezheni.
Panewo shanduko yemitengo kubva pamadhora gumi nemapfumbamwe kuenda ku19% yehumambo pese painotumirwa mutambo. Humambo uhwu huchashanda chete kana mihoro pamutambo inodarika mazana matatu emadhora pakota. Shanduko idzi dzakaita Unreal Injini 5 yemahara kune vakawanda Developers izvo zvingangowedzera kupinda mumusika kwechishandiso. Kunze kweAroid uye iOS, inogona zvakare kushandiswa kuPC, Mac, Xbox One uye PlayStation 4 mutambo wekuvandudza. Inouyawo nezvishandiso zvekuwedzera rakapotsa chokwadi uye Augmented reality michina ye nhare mbozha kusimudzira. Iko kuita kwakasiyana-siyana uye kugona kwechishandiso ichi kunogona kukubatsira iwe kukudziridza inokatyamadza mitambo yechero saizi uye mhando zvichiita kuti ive sarudzo yakanaka kune akawanda nharembozha. Developers.
Read More: 7 Matipi Ekubudirira Mune Yako Nhare mbozhanhare Kubudirira Endesa
kubatana iri intuitive mutambo wekuvandudza injini inopa huwandu hwakawanda hwezvinhu kune ese ari maviri 2D uye 3D mutambo wekuvandudza. Ndiyo imwe yeakanakisa injini dzemuchinjikwa-chikuva nhare mbozha kusimudzira. Unogona kukurumidza uye nyore kutakura mitambo pa Android, iOS, Windows Phone 8, uye BlackBerry Mapuratifomu. Kubatana kunotsigira midziyo kubva kune makuru 3D applications se 3ds Max, Maya, Softimage, CINEMA 4D, Blender etc. Nekuburitswa kweUnity 4.3 ichangoburwa, yekuzvarwa 2D kugona, kutsigira sprites uye 2D physics inowedzerwawo kune yayo kugadzira kwayo.
kunyange kubatana inosangana nezvose zvikuru zvekushandisa zve3D, kune zvakawanda zvipingamupinyi kumagadzirirwo ayo ekugadzirisa mukati meinjini edhita. Kunze kwemamwe echinyakare maumbirwo, zvese zvinofanirwa kugadzirwa uchishandisa chechitatu-bato 3D kunyorera. Neimwe nzira, iwe unogona kugara uchitenga zvinhu kubva ku raibhurari yemidziyo (mitengo inotarwa nemunyori wemidziyo). Zvakare, nerutsigiro rutsva rwe64-bit uye WebGL, Unity 5 sezviri pachena inokwikwidza yakasimba pakati pe nhare mbozha kusimudzira injini.
Injini yekubatana inouya nemitengo mizhinji yemitengo. Iyo Pro vhezheni yeUbatana, inova $ 1,500 kana $ 75 / pamwedzi pachigaro uye papuratifomu. Iko zvakare kune Kubatana 5 Yega Edition iyo inosanganisira akawanda akajairika maficha seProfiler, Panyama-yakavakirwa shading, Reflection Maitiro etc. Zvisinei, kune akawanda maitiro anokodzera kuwana iyo rezinesi. Kuti uwane rumwe ruzivo, unogona kushanyira iyo Mitengo yekubatana peji.
Corona SDK ndeye muchinjika-chikuva 2D mutambo wekuvandudza kit inoshandiswa mukusimudzira mitambo yenharembozha Mapuratifomu pamwe neApple TV & Android TV. Inoshandisa Lua semutauro wayo wekunyora uyo unozivikanwa pakati pemutambo Developers nekuda kwenguva pfupi kudzidza curve. Corona SDK inowanikwa Mac pamwe neWindows masisitimu anoshanda. Iyo inouya neanopfuura mazana mashanu APIs emhando yemabasa kubva kuanimations kusvika kunetiweki. Nekuyedzwa chaiko-nguva muCorona, unogona kufunga, kodhi uye kusimbisa mune imwe chete kuenda.
Chimwe chinhu chikuru chekushandisa Corona kune nhare mbozha kusimudzira ndiwo mutengo wayo. Nehurongwa hwemahara Corona yakwezva vazhinji Developers uyezve, yakagadzira nharaunda yakakura yekutsigira. Kunyange iyo yekutanga vhezheni iri yemahara, inouyawo ne Enterprise mhinduro inodhura $ 79 / mwedzi, uye imwe vhezheni inodhura zvishoma pamadhora zana nemakumi mapfumbamwe / mwedzi. Imwe yakaderera neCorona ndeyekuti inogona kushandiswa chete 199D mutambo wekuvandudza. Iyo ine inogumira kune isina kugona mu 2D yemitambo, VR kana AR. Kana iwe uri kuronga kugadzira mutambo weAAA saka iyi chikuva inogona kunzwa kudzikisira.
Dzidziso: Kugadzira Chikumbiro Uchishandisa Corona Sisitimu
4. Ngarava yematanda:
Lumberyard yeAmazon iri yemahara AAA mutambo injini iyo inogona kushandiswa kweApple, iOS, PC, Xbox One uye PlayStation 4. Yakavakirwa pa CryEngine, kitambo chekusimudzira mutambo chakagadzirwa naCrytek. Iine muchinjika-chikuva mashandiro, Lumberyard inopa akawanda maturusi ekugadzira AAA mhando mitambo. Zvimwe zveakanakisa maficha anosanganisira akazara C ++ sosi kodhi, network, Audiokinetic's feature-rich ruzha injini, kusangana isina musono neAWS Cloud uye Twitch API. Mavara ayo anowedzeredzwa aine huwandu hwenzvimbo, hunhu, kupa uye kunyora maturusi ayo anobatsira kugadzira enzvimbo-yemhando 3D nharaunda pachiyero.
Amazon yakawanawo Twitch, inorarama-yekutenderera uye yekutaura pasocial vhidhiyo chikuva ine mushandisi wevashandisi vanopfuura mamirioni evashandisi pamwedzi. Iyo puratifomu iri kunyanya kutariswa pakutepfenyura kwemutambo wevhidhiyo yave chikuva chakakosha chekushambadzira mbozha uye vhidhiyo yemutambo. Nekubatanidzwa kwekuzvarwa Developers inogona kusanganisira zvemagariro emitambo maficha uchishandisa Twitch ChatPlay, Twitch Metastream uye TwitchJoinIn.
Mitengo ndeimwe huru yemakwikwi mukana weLumberyard. Iko hakuna mvumo yemubhadharo kana marezinesi emari inosungirirwa kumushandisi wekushandisa. Mari chete inosanganisirwa nechishandiso mashandisirwo anodikanwa eAWS Cloud yemitambo yevatambi yepamhepo yakawanda. Asi izvo zvinouya nemukana wekukurumidza kukura uye kuendesa nekudaro, zvichiratidza kukosha kwemutengo.
Read more: Wepamusoro mashanu Matambudziko muMobile Game Development [Ine Mhinduro]
Seizvo zita rinoratidza Cocos2D-x 2D mutambo wekuvandudza mutambo weiyo Android, iOS, Linux, OS X uye nharembozha dzeBlackberry. Kuve yakavhurika-sosi chishandiso, inouya nemitoro mizhinji yezvinyorwa zvinyorwa uye rutsigiro rwemunharaunda. Izvo zvine hunyanzvi zvine hunyanzvi mupfungwa yekuti iwe unogona kugadzira mitambo yehukuru hwakadzika se 1.5 MB. Iyo inoshandisa OpenGL kupa yakagadziridzwa 2D mifananidzo.
Iyi puratifomu yakashanduka zvakanyanya mumakore mashoma apfuura uye yave sarudzo inofarirwa nevakawanda Developers pasi rose. Mimwe yemitambo yakakurumbira yakagadzirwa uchishandisa Cocos2D-x inosanganisira Badland, Clash of Kings, Hardest Game Ever 2, Contra: Evolution etc. Iyo yemahara mitengo uye raibhurari yezvinhu zviripo zvinoita kuti ive mukwikwidzi akanaka we2D mutambo wekusimudzira. Kunyangwe chiri chishandiso chinoshanda kwazvo chine mashoma kugona mu3D mutambo wekuvandudza. Kunze kweizvi, ndeye yakanakisa mutambo wekuvandudza SDK yediki kusvika yepakati-saizi chirongwa.
Bhonasi - VakaBox:
Vaka bhokisi iyi 2D mutambo wekuvandudza injini iyo inobvumidza vashandisi kuvaka mitambo yakapusa pasina chero kodhi. Iyo inopa yakachena mushandisi interface uko iwe unogona kungo dhonza uye kudonhedza dhizaini zvinhu kuti ugadzire yako chaiyo yako mutambo pasina nguva. Izvi zvinogona kushandiswa kune ese Android uye iOS chikuva nekudaro, zvinoshanda zvakakwana seyambuka-chikuva mutambo wekuvandudza injini. Iko mutengo unodhura unodhura $ 99 / mwedzi kana $ 1008 / gore.
Izvo zvakanaka zvekugadzira mitambo yakapusa seColorSwitch, Iyo Line Zen, SKY nezvimwe. Muchokwadi, iyi mitambo yese yakagadzirirwa kushandisa BuildBox. Pane zvinopesana, injini haina 3D kugona uye iwe unenge uine zvipingaidzo mukushandisa maficha ayo asingawanikwe mune yekuvandudza koni. Kunyangwe kana kusasarudza iri rekushandisa zvakanyanya kunoenderana nezvaunoda. Pakazara mhinduro yakanaka kune vasiri-mapurogiramu kugadzira mitambo. Ziva kuti iwe uchazoda graphic dhizaini kuti ugadzire dhizaini zvinhu mune mazhinji kesi.
Kutanga mutambo kubva pakutanga kunoda ruzivo rwepamusoro-soro. Hiring a nhare mbozha kusimudzira kambani ine musoro kune wese munhu ane shoma ruzivo rwehunyanzvi kuti atange kusimudzira ega. Kugadzira timu kubva mukutanga zvakare kunobvisa zviwanikwa zvakawanda zvaigona kushandiswa mukushambadzira kwemitambo uye kumwe kuvandudza. Kana uri kutsvaga a nhare mbozha kusimudzira kambani saka inzwa wakasununguka kutibata. Iine chiitiko chakajeka chekushanda neese 2D uye 3D mutambo wekuvandudza kits, isu takagadzirira kutora chirongwa chechero chiyero. Bata nesu nhasi kune POC kana hurukuro yeprojekiti.